Waa maxay naqshadeynta garaafyada: waa maxay iyo hawlaha ugu muhiimsan ee naqshadeynta | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | | Design Graphic, General
Xigasho: American Business School
Bal qiyaas in kooban in kooban ee mashruucaagu uu ka bilaabmayo aasaaska ahaanshiyaha nashqada sumadda halkaas oo aad sidoo kale ku qasban tahay in aad naqshadayso qayb kasta oo ka mid ah qaybaha sare (qalabka qoraalka, asalka sawirada, warbaahinta khadka iyo khadka tooska ah ee sumadda, iwm.)
Intaa waxaa dheer, waa inaad sidoo kale dejisaa buug yar ama buug aqoonsi oo muujinaya horumarinta astaanta. Haddii astaanta aad naqshadaynayso ay ku habboon tahay bogagga shabakadda, waa inaad sidoo kale hagaajisaa si ay ugu habboonaato qaabka shabakadda ee aad naqshadayso. Jaleecada hore, wax kasta oo aan kuu sheegayno waxaa laga yaabaa inaysan si buuxda kuu aqoon, si fiican, Wax kasta oo aan soo sheegnay waa qayb ka mid ah naqshadeynta garaafka.
Taasi waa sababta qoraalkan aan kuugu keenayo jawaabta su'aashaada «Maxaa loogu talagalay? iyo mar haddii aanaan doonayn in aan ku siin in aad sugto waqti dheer, waxaan kuu sharxi doonaa hoos.
1 Naqshadeynta garaafka
1.1 Hawlaha ugu waaweyn
1.2 naqshadeeye wanaagsan
2 Maxaa loogu talagalay?
3 Noocyada Naqshadeynta
3.1 Naqshadaynta tifaftirka
3.2 Naqshadaynta shabakada ama mobilada
3.3 sawir iyo sawir
3.4 Baakad ama naqshadaynta baakad
Naqshadaynta garaafyada waxaa iska leh aagga farshaxanka garaafyada, waxaana lagu qeexaa inay tahay edbinta inta badan mas'uul ka ah abuurista, iyadoo la isticmaalayo walxaha garaafyada (qaababka joomatari, xarfaha, kala duwanaanta midabka, iwm.) ee mashruucyo taxane ah oo keena waxa aan u naqaano xayaysiis ahaan.
Waa maxay sababta xayeysiiska loogu soo bandhigay naqshadeynta? Su'aashani waa mid aad u gaar ah in la weydiiyo haddii aynaan weli fahmin hawlaha ugu muhiimsan ee naqshadeynta. Taasi waa sababta naqshadeynta garaafku u wareego wax badan. abuurista iyo naqshadeynta warbaahinta xayeysiiska kuwaas oo keenaya dallacaadda ama iibinta kuwan.
Si kale haddii loo dhigo, naqshadaynta garaafku waxay had iyo jeer isku dayi doontaa inay naqshadayso mashaariicda u baahan istaraatijiyad suuq-geyneed oo ay higsanayso inay gaadho dad gaar ah. Sababtan awgeed, xayeysiisku waa mid ka mid ah xididada sameeya naqshadeynta, maadaama ay gacanta ku hayaan midna waxba ma noqon doono kan kale la'aanteed.
Hawlaha ugu waaweyn
Naqshadu waxay fulisaa hawlo taxane ah si loo gaaro, habkan, ujeedooyinka la qorsheeyay:
Naqshadaynta garaafku waxay leedahay weji cilmi baaris oo horudhac ah, ka hor inta aan la naqdin waa lagama maarmaan in la baaro. Waa muhiim Si gaar ah u ogow waxa iyo sida iyo waxa ka sarreeya dhammaan kuwa. Kuwani waa su'aalo gaagaaban oo ay tahay in naqshadeeye kastaa is weydiiyo ka hor warbixin kooban ama mashruuc lala yeesho macmiil gaar ah. Macluumaadka aan ku maamulno inaan qabanno ayaa noo adeegi doona dhammaan hababka soo socda.
Waxa kale oo ay leedahay fikrado taxane ah oo maamula si ay u abuuraan walxo garaafyo ama waxa aan u naqaanno garaafyo yaryar ama sawir-gacmeedyo. Fikradahani waxay u adeegaan in la tuuro ama la doorto, iyadoo ku xiran hadba waxa ku habboon mashruuca aan fulineyno.
Naqshadu waxay sidoo kale ku saabsan tahay isgaarsiinta iyo isdhexgalka iyada oo loo marayo waxa aan naqshadeyno. Taas macnaheedu waxa weeye, ma sameeyo si qaylo ah laakiin wuxuu kula xiriiraa dadka kale isagoo adeegsanaya luqad calaamad ah. Sidaa darteed muhiimadda ay leedahay in calaamad lagu aqoonsado isticmaalayaasha iyo la qabsiga qiyamka shirkadda iyo suuqa.
Cilmi-nafsiga ayaa sidoo kale soo galaya ciyaarta, maadaama ay tahay saldhigga mabaadi'da naqshadeeye kasta. Suuqgeynta waxaa loo yaqaanaa fikirka naqshadeynta waana saldhigga lagu xaqiijinayo in wax kasta oo aan naqshadeyno ay noqdaan kuwo mira-dhal ah oo la aqoonsan yahay.
Ilaa hadda waanu sharaxnay waxa nashqaduhu yahay, laakiin waxa laga yaabaa inaadan garanayn waxa naqshadeeyaha wanaagsani u baahan yahay si uu u gaadho yoolalka aan soo sheegnay. Taasi waa sababta aysan dadka oo dhan ugu fiicnayn naqshadeynta oo aan dhammaanteen laga dhigin inaan wax walba samayno.
Waxa ugu horreeya naqshadeeye waa in uu leeyahay hal-abuur iyo maskax furan taasoo kuu ogolaanaysa inaad fuliso oo aad u diyaargarowdo mashruuc kasta oo kugu soo wajahan. Taasi waa sababta ay tahay inay awood u yeelato inay u beddesho naas-nuujin fudud mashruuc si buuxda u raacaya fikradaha uu soo jeediyay macmiilku.
Maxaa kale waa in uu leeyahay waa hubaal dabeecad, waa in aad bixisid dabeecad iyo shakhsiyad dhab ah oo xirfad leh waxaad samaynayso. Ha ku khaldin shakhsiyadda iyo codka wada-hadalka. Codku waa habka ay sumadda ama waxa aan naqshadeynay wax uga qaban doono dadkeeda, shakhsiyadda ayaa ah wax kasta oo naqshadeeyuhu uu yeelan doono si uu u fuliyo mashaariicda.
Qof firfircoon oo leh ujeeddooyin ama yoolal Waxa hubaal ah inuu sidoo kale yahay shakhsi muhiim u ah doorka naqshadeeye. Taasi waa sababta ay tahay in aad leedahay ujeedooyin qorshaysan oo aad ka soo baxdo, haddii kale ma awoodi doontid inaad 100% ku jimicsato waxa aad qabato mar haddii nakhshaduhu ay ku saleysan yihiin in ay noqoto edbin halkaas oo ujeedooyinka muhiimka ah qaarkood ay ku guuleystaan.
Maxaa loogu talagalay?
Naqshadu waxay u hoggaansantaa sifooyin taxane ah oo ka dhigaya nooc ka mid ah farsamada shaqada, maadaama wax kasta oo la naqshadeeyay ay leeyihiin sababta iyo waxa loogu talagalay.
Naqshadu waxay naga caawisaa inaan ahaano nafteena, Mashruuc kasta oo aan fulino waxaa had iyo jeer ku jira calaamad ama sawir shakhsi ah oo noo tilmaamaya naqshadeeyayaasha, waana sababta marka aan ka hadlayno naqshadeynta waxaan sidoo kale ka hadalnaa aqoonsiga.
Waxa kale oo ay caawisaa xidhiidhka, sida aynu hore u soo sheegnay. Waxaan isticmaalnaa luqad naga caawineysa inaan ku xirno habkayaga shaqada iyo naqshadeena. Waad ku mahadsan tahay tan, dad badan oo badan ayaa dhiirigeliya naqshado kale waxayna sidan u maareeyaan inay abuuraan nooc ka mid ah luqadda caalamiga ah.
Shirkado badan ayaa u suurtagashay in ay guul ka gaaraan suuqa iyadoo ay ugu wacan tahay istaraatiijiyad suuqgeyneed oo wanaagsan. Taasi waa sababta naqshadeynta garaafyada sidoo kale boosaska iyo caawinta dad badan oo ku jira goobta ganacsiga si ay u muujiyaan calaamadooda.
Naqshadeynta wuxuu kaa dhigayaa qof madaxbanaan, macneheeduna maaha in aad u shaqeyso naftaada oo kaliya, balse waxay kaa dhigaysaa qof leh xidido madax-banaan, kartina u leh in uu kaligiis ama shirkad ka shaqeeyo oo uu gaaro ujeedooyinka la qorsheeyay.
Waxaad la macaamishaa dhammaan walxaha garaafyada ee jira, waxaad baranaysaa iyaga oo sidoo kale waxaad taqaanaa sida loo dhigo iyada oo loo eegayo xaalad kasta, waa waxa aan ugu yeerno kala sareynta muuqaalka. Intaa waxaa dheer, kaliya maaha inaad ku xirto habka meelaynta walxaha laakiin leh cilmi nafsiga mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Xigasho: Stripes buluug
Waxaan fahamsanahay in naqshadeynta garaafyada ay leeyihiin qoyska farshaxanka garaafyada, laakiin ma awoodno inaan qeexno qaar ka mid ah qoysaska ama noocyada jira. Taasi waa sababta, hoos, waxaan ku tusin doonaa noocyada naqshadeynta garaafyada ee jira, si aad habkan u furto maskaxdaada oo aad naftaada u hagto mid ku habboon tayadaada iyo dhadhankaaga.
Naqshadaynta tifaftirka Waxay ka tirsan tahay qoyska naqshadeynta buugaagta iyo wargeysyada. Waa mid ka mid ah wejiyada si fiican ugu jiri kara mashruuca aqoonsiga sumadda, tusaale ahaan, samaynta buug-gacmeedka aqoonsiga waxa uu noqon karaa mid ka mid ah walxaha loo qaabeeyey qaybtan mashruuca.
Marka loo eego sifooyinkeeda, waxaa la iftiimiyay in naqshadeeyaha inta lagu jiro marxaladdan uu baranayo xarfaha, oo uu barto inuu doorto. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale horumarisaa kala sarreynta qoraalka waxayna isticmaashaa agabka sida astaanta midabka iyo nidaamyada daabacaadda.
Marka la soo koobo, wax kastaa kuma salaysna naqshadaynta buugaagta ama daboolida majaladda, laakiin sidoo kale waa lagama maarmaan in la dhex geliyo qaab-dhismeedka hal-abuurka muhiimka ah si loo awoodo in si sax ah loo sharraxo naqshadaha.
Naqshadaynta shabakada ama mobilada
Naqshadaynta shabakada ama mobilada waa qaybta ugu is dhexgal ee naqshadaynta garaafyada. Waxay mas'uul ka tahay horumarinta warbaahinta xayeysiiska ee internetka waxayna ka caawisaa xoojinta muhiimada astaanta. Sidoo kale waa mid ka mid ah wejiyada ku jiri kara mashruuca aqoonsiga, gaar ahaan haddii astaanta aan naqshadeyneyno loo qorsheeyay bogagga shabakadda.
Inta lagu jiro marxaladan, naqshadeeyuhu wuxuu diyaarinayaa cabbirrada warbaahinta si loo naqshadeeyo (calamadaha, dhejiska, sawirka astaanta, iwm.)
sawir iyo sawir
Jaleecada hore waxay noqon karaan laba adduun oo gebi ahaanba kala duwan, laakiin haddii aan eegno boodhka xayeysiiska (waxyaabaha muhiimka ah ee naqshadeynta garaafyada) sawir ama sawir lama waayi karo si uu ula socdo.
Labaduba way wada socdaan, tani macnaheedu maaha in qofka u heellan naqshadaynta inuu yaqaan sida wax loo sawiro ama loo sawiro, si fudud. waa inay xisaabta ku dartaa tayada muhiimka ah ee qaarkood.
Baakad ama naqshadaynta baakad
Tani waa meesha dhammaan baakadaha alaabtaada summadaysan ay ka hirgalaan. Marka aan naqshadeyno astaanta, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la diyaariyo baakadaha haddii alaabta la iibinayo ay tahay mid jireed.
Taasi waa sababta halkan naqshadeeyaha ama naqshadeeyaha waa inaad xisaabta ku dartaa dhinacyada shaqada ee alaabtaada iyo weelka: agabka, cabbirada, walxaha garaafka lagu daro, iwm.
Naqshadeynta aqoonsiga waxay koobeysaa wax kasta oo la xiriira horumarinta summada xoqan ama xitaa qayb ka mid ah dib-u-qaabaynta. Waa mid ka mid ah wejiyada shaqada ugu badan la qabto maadaama wax walba lagu xisaabtamayo si astaanta aad naqshadeyso loo aqoonsado.
Naqshadaynta noocan oo kale ah, dhammaan walxaha garaafka ee la magacaabay waa in la tixgeliyaa, sidoo kale Aqoon u leh suuq-geynta iyo xayeysiinta.
Naqshadu waa aasaaska wax kasta oo inagu xeeran, si ay u noqoto hab cusub oo fariinta loo gudbiyo. Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay naqshadeynta iyo gaar ahaan inaad fahanto doorka muhiimka ah ee ay naga qaadato bulsho ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waa maxay naqshadeynta garaafyada?
Waa maxay html6?